EU oo billowday qaybsiga qaxootiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Qaxooti soo cago dhigay Gireega. Foto: Petros Giannakouris
EU oo billowday qaybsiga qaxootiga
Sweden oo 4400 qaxootiya ka soo qaadeysa Talyaaniga
La daabacay måndag 5 oktober 2015 kl 10.06
Waddamada EU ayaa dhawaan billaabi doona qaybsiga qaxootiga ka soo tillaaba badda dhaxe (Mediterranean) ee soo gaara dalka Talyaaniga.
Sweden ayaa ka mid noqon doonta waddamada ugu horeeya ee la soo dejinayo qaxootigas sida ay tabisay wakaaladda wararka Talyaaniga ANSA.
Arrintaan ayaa wasiirada socdaalka waddamada EU horey ugu heshiiyeen muddo hadda ay soo wareegtay labo todobaad, kadib wadoxaajood adag oo ay wasiiradu ka yeesheen sidii loo qaybsan lahaa 120000 oo magangeliyo doon ah oo soo gaaray dalalka Gireega iyo Talyaaniga.
Waddamada ugu horeeya oo la soo gaarsiinayo magangeliyo doonka laga soo qaadayo Talyaaniga iyo Gireega ayaa kalo ah Luxemburg, Sweden iyo Estoniya, sida ay werisay wakaaladda wararka ee Talyaaniga ANSA. Magangeliyo doonka Sweden la soo gaarsiin doona ayaa diyaarad looga soo daaboli doonaa jasiiradda Sisilien Talyaaniga, dhawaana soo cago dhigan doona Sweden, laakiin hey’addaha dowliga Sweden weli arrintan kama aysan hadlin.
Sida ay EU heshiiska horey ugu gaartay Sweden waxaa laga filayaa in ay qaabisho 4400 oo ka mid ah qaxootigan 12000. Waxayna quseysaa qaxootiga fursadda u heysta in ay helaan magangeliyo, tusaale ka soo cararay dalka Suuriya .
Inta badan qaxootiga doonyaha kaga soo tillaaba badda dhaxe waxay soo cago dhigaan waddamada Talyaaniga iyo Gireega. Qulqulka qaxootiga ayaa waddmadan ka abuuray xaalad adag oo keentay in waddadaan u babac dhigi waayeen qaabilaada magangeliyo doonkan farah.